रअ टोलीको व्यस्त कार्यक्रमः देउवा गए भेट्न, प्रचण्डलाई आए भेट्न
scheduleसोमवार माघ ६ गते, २०७६
काठमाडौँ, ७ साउन । नेपाल भ्रमणमा रहेको भारतीय गुप्तचर संस्था रिर्सच एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) को टोली सोमबार उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्तामा व्यस्त रह्यो ।
रअको टोलीले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका केही नेतासहित संसदका विभिन्न समितिका पदाधिकारीसँग सामूहिक र छुटाछुट्टै भेटवार्ता ग¥यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आइतबार राति भेटवार्ता गरेका रअ अधिकारीले सोमबार विहान सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेको हो ।
रअ प्रमुख समान्तकुमार गोयल नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोली आइतवार दिउँसो काठमाडौं आएपछि भेटवार्तामा जुटेको थियो । भेटघाटका लागि नेता देउवा स्वयं लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास पुगेको थियो भने प्रचण्डलाई भेट्न रअका अधिकारी प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए ।
दूतावास स्रोतका अनुसार आइतवार साँझ ७ बजेर ४० मिनेटमा दूतावास पुग्नुभएका देउवा करिव चार घन्टापछि राति ११ बजेर ४० मिनेटमा बाहिरिनुभएको थियो । देउवासँगको भेटमा काँग्रेस सांसदद्वय डा. अमरेशकुमार सिंह र विनोद चौधरी पनि सहभागी रहनु भएको बताइएको छ । रअ अधिकारीको सम्मानमा दूतावासले आइवार साँझ दूतावास परिसरमा रात्री भोज दिएको थियो । सोही जमघटमा देउवा सहितको टोली दूतावास पुगेको हो ।
रअ प्रमुख गोयल सहितको टोली बौद्धस्थित हायात होटलमा बसेको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
श्रेष्ठ र लेखकले बधाई दिँदा नेम्वाङ मुसुक्कै !
विश्वको घुम्नैपर्ने १० वटा देशको सुचीमा नेपाल पहिलो
काडमाडौं । महान वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्स्टाइनले आफ्नी छोरीलाई प्रेमको आयाम र सामर्थ्य झल्काउने एउटा चिठी लेखेका थिए । एउटा...
काडमाडौं, ६ माघ । एक महिनाको रस्साकस्सीपछि सभामुख पाएको सत्तारुढ नेकपाभित्रको पूर्वमाओवादी समूह निकै उत्साहित देखिएको छ...
हेटौंडामा मन्त्रालय राख्न जग्गाको खोजी तीव्र
हेटौँडा, ६ माघ । वाग्मती प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएसँगै प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका लागि जग्गा खोजी शुरु गरेको छ । हाल...
प्राणघातक हुनसक्छ बच्चालाई चुम्बन गर्नु !
एजेन्सी । स-साना बालबालिकालाई हेर्दा जो कोहीलाई पनि मायाले चुम्बन गर्न मन लाग्छ । भर्खरका कलिला बच्चा मन नपर्ने को हुन्छ र...
अब सुर्खेतबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र
सुर्खेत, ६ माघ । यातायात व्यवस्था विभागले सुर्खेतबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्न प्रदेश सरकारअन्र्तगतको...
अध्यक्षद्वयको आग्रहपछि ‘प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’ भन्दै निस्किइन् शिवमाया
काठमाडौं, ६ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपसभामुख डा. शिवमाया...
‘मिसाइल म्यान अफ इण्डिया’सँग जोडिएका यी ५ रोचक तथ्य
एजेन्सी । बहुआयामिक प्रतिभाका धनी स्वर्गीय एपिजे अब्दुल कलामलाई वैज्ञानिक, शिक्षाविद् तथा दूरदर्शी व्यक्तित्वको रूपमा...
महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा ३ मिनेट बसेर संसद बैठक स्थगित
काठमाडौँ, ६ माघ । ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभाको दोस्रो पटक बैठक बसेको छ । यसअघि आजै बसेको पहिलो...